Umdlavuza onomdlavuza ngumdlavuza wesithathu ovame kakhulu emhlabeni wonke, kanti isisusa sesibili esibangelwa umdlavuza ukufa kubantu, kanti isizathu sesithathu esibangelwa umdlavuza ukufa kwabesifazane.
Umdlavuza onomthelela ubathinta amadoda nabesifazane ngokulinganayo, futhi njengenhlobo eminingi yesifo somdlavuza, ingozi yentuthuko yayo iyanda ngokukhula. Ngenhlanhla, ukuhlukumezeka nokufa okuvela kulolu hlobo lomdlavuza kuye kwancipha kusukela ngo-1985, ngenxa yokuvimbela ngcono, ukuhlolwa, ukuxilongwa kwangaphambili kanye nokwelashwa okuphumelelayo. Ngokungafani nezinye ezinye izinhlobo zomdlavuza, kucatshangwa ukuthi iningi lomdlavuza we-rectal livela "ebhubhisini" ye-polyps enobungozi, engagcinwa kancane kancane ngokuhamba kwesikhathi, futhi ibe yisisu esinomdlavuza. Ezandleni zomdokotela onolwazi, ngaphezu kwama-95% alawa ma-polyps angama-precencerous (adenomas) angatholakala ngesikhathi sokuqala futhi asuswe ngesikhathi se-colonoscopy, evimbela ngokuphumelelayo ukuthuthukiswa komdlavuza ezindaweni ezikude.
Ukwelashwa kwe-Cancer Rectal in Israel
Kulezi ziguli eziningi ezixilongwa ngomdlavuza we-rectal, ukwelashwa okuyinhloko kuhlinzwa. Ezimweni eziningi, ingxenye yekolon noma i-rectum isuswe kanye nama-lymph nodes eseduze abesele aphethwe umdlavuza. Esikhathini esiningi seziguli, ubukhulu obukhulu noma ubuhlanga bungabuye babuyisane ngesikhathi sokuhlinzwa, okugwema isidingo sokuba i-colostomy. I-Colostomy, eyesikhashana noma ehlala njalo, isadingeka ngezikhathi ezithile ezigulini eziphathwa ngomdlavuza oqhubekayo obala.
Ngokomlando, abagulayo abanomdlavuza we-rectal sebevele basakaze esibindi nakwezinye izitho zesimiso sokugaya (ie umdlavuza we-metastatic) ngokuvamile ababhekiselwe ukuhlinzwa. Kodwa-ke, ngisho neziguli ezinomdlavuza we-metastatic colorectal zihlinzekwa nge-chemotherapy ukukhulisa isikhathi sokuphila, uhlobo lwezokwelapha oluye lwabonisa intuthuko enkulu ekusebenzeni. Eziningi zalezi ziguli njengamanje zibhekwa njengokhetho lokususwa kokuhlinzwa komdlavuza obala, ngaphambi noma ngemuva kwe-chemotherapy. Ngaphezu kwalokho, amacala amaningi alo mdlavuza osevele ehlelwe esibindi, amaphaphu nezinye izitho manje angaphathwa ngokuphumelelayo ngokuhlanganiswa okuhlukahlukene, izindlela zokuqeda (njengama- radiation frequency), i- radiotherapy kanye ne-chemotherapy. Zonke lezi zindlela zokwelapha ezintsha zitholakala ezikhungweni zezempilo zokwelapha ezizimele nezizimele ku-Israyeli.
Enye into esanda kuyenzeka ekwelapheni ukwelashwa komdlavuza wekoloni kusetshenziswa izindlela ezingenasidingo ukuhlinzekela ngokufanayo ukuhlinzwa komdlavuza njengangaphambili, kodwa usebenzisa izindlela zokuhlinza zanamuhla ezishiya ukucubungula okuncane futhi zinciphise isikhathi sokuphumula ngemuva kokuqinisekisa izinga eliphezulu lokuphila. Ukusetshenziswa kwezindlela zokuhlinzwa eziphambili ze-laparoscopic ne-robotic ekwelapheni umdlavuza we-rectal kwaholela ekutholeni okusheshayo kwempilo yeziguli ngemva kokuhlinzwa, uma kuqhathaniswa nezindlela ezijwayelekile zokwelashwa, futhi kuqinisekiswe ukuthi akunakwenzeka ukuphindaphinda umdlavuza. Kulabo abanezifo zomdlavuza we-rectal, imithi ejwayelekile yokwelashwa kwe-chemotherapy kanye nokwelapha imishanguzo ngokuhambisana nezinqubo ezithuthukisiwe zokuhlinzekwa (isibonelo, ukukhishwa kwesisindo somzimba jikelele) kusetshenziswe esiteji sokuqala, okuye kwanciphisa kakhulu isidingo sokuba i-colostomy njalo futhi ingozi yokuphindaphindiwe komdlavuza endaweni yesisu esedlule ngaphambili .
Kule minyaka eyishumi edlule, kwenziwa inqubekela phambili enkulu ekwelapheni umdlavuza we-rectal, futhi esikhathini esizayo esiseduzane, okumele kwenziwe kulindeleke. Kukhona izilingo eziningi eziqhubekayo zokwelapha ezigulini ezinomdlavuza omnyama, futhi lezi zilingo ziwumthombo wethemba elihle lokuthuthukisa ngokwengeziwe ubude kanye nemigomo yokuphila kweziguli ezitholakale nomdlavuza wekoloni.
Eyokuqala umusi esitimela emhlabeni: umlando ezithakazelisayo amaqiniso